Madaxda Kaniisadaha Kenya oo aqbalay dalab kaga yimid xukuumad... | Universal Somali TV
Madaxda Kaniisadaha Kenya oo aqbalay dalab kaga yimid xukuumada Nairobi
Baadariyada kaniisadaha dalka Kenya ayaa loogu baaqay in aysan qaadan lacagaha kaga yimaada siyaasiyiinta iyo hogaamiye yaasha xilalka ka haya Dowlada.
Arintaan ayaa looga gol leeyahay in lagu wiiqo musuq maasuqa iyo wax isdaba marinta ka jirta Kenya oo lagu tilmaamo in ay tahay wadamada safka hore kaga jira musuq maasuqa ka jira qaarada Afrika.
Agaasimaha dacwad soo oogaha guud mr Nuuradiin Yusuf Xaaji ayaa bilo ka hor ugu baaqay in baadariyada aysan ku lug yeelan lunsiga lacagta dadweynaha ayna iska hubiyaan marka ay siyaasiyiinta ay lacago ka Qaadanayaan.
Madaxweyne ku xigeenka Kenya mr William Ruto ayaa todobaad walba lacag ka badan mushaarka uu qaato ku dhiiba marka uu booqdo kaniisadaha waxaana arintaasi shaki weyn ka muujiyay hogaamiyaha mucaaradka mr Raila Odinga.
Dr Ruto oo horay uga jawaabay tuhunkaan ayaa sheegay in uu leeyahay ganacsi iyo dhaqaala badan oo si gaar ah u leeyahay uuna wadi doono maalgalinta Kaniisadaha.
Balse siyaasiyiinta ka soo horjeeda ayaa arintaan u arka mid uu ku kasbanayo hogaamiyeyaasha diimaha si ay ugu fududaato loolanka madaxtinimo ee doorashada dhaceysa sanadka 2022-da.
Si kastaba ha ahaatee baadariyada kaniisadaha ku yaal gobolka bartamaha oo uu ka soo jeedo madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa aqbalay maanta baaqa kaga yimid dowlada oo ah in aysan qaadan lacag aan la ogeyn halka laga Keenay.
Kan-xigaMareykanka oo xayiraad dhanka socdaal...
Kan-horeDiyaarada Ethiopian Airlines oo lagu ...
55,228,812 unique visits